शिक्षामा सरकारी लगानी – बालुवामा पानी | Fewa News
Published on: August 25, 2017 No Comments
काठमाडौं, भदौ ९ –
डा. राजेन्द्र चापागाई –
शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्डनै कमजोर बन्यो भने विकासले गति लिन सक्दैन । विद्यालय शिक्षा शैक्षिक जनशक्ति निर्माणको आधारस्तम्भ हो । समुदायिक विद्यालयका लागि सरकारले अर्बौ लगानी गरेको छ तर शैक्षिक स्तर आसातित माथि उठ्न सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयका लागि सरकारले प्रसस्त लगानी गरे पनि परिणाम वर्षेनी निरासजनक बन्दै गएको छ । अभिभावकको लगानी बाहेक सरकारले मात्र प्रतिविद्यार्थी वार्षिक करिब रु ३० हजार खर्च गरिरहेको छ । जब कि निजी विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि प्रतिमहिना औसत ३ हजारका दरले अभिभावकको वार्षिक ३६ हजार लगानी हुन्छ। सरकारको लगानी सामुदायिक विद्यालयमा हरेक वर्ष बढ्दो छ । शिक्षक तालिम का लागि त्यति नै धेरै लगानी गरिएको छ । क्षेत्र क्षेत्रमा तालिम केन्द्र स्थापना गरिएका छन् भने शिक्षकहरुलाई गुणस्तरीय तालिम दिन उपसचिव सरहका विज्ञहरु राम्रो तलब भत्ता सुविधा दिएर खटाइएको छ । तालिम लिने शिक्षकहरुलाई पनि भत्ता व्यवस्था गरि तालिमका लागि सरकारले धेरै खर्च छुट्याएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई महिनौ तालिम दिइन्छ र देशका हरेक सामुदायिक विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षक छन् जबकी निजी विद्यालयमा बिरलै मात्र तालिम प्राप्त शिक्षक छन् । कहिलेकाहीँ प्याब्सन, एन प्याबसनले दिने एक दुई दिने तालिम बाहेक निजी विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम दिने निकाय वा दिगो व्यवस्था गरिएको छैन । निजी विद्यालले आफ्ना शिक्षकहरुलाइ सेल्फ लगानीमा तालिम दिने काम बिरलैले मात्र गरेका छन् त्यो पनि एक दुई दिनको मात्र ।
सामुदायिक विद्यालमा शिक्षकलाई वोर्कलोड पनि बढी दिइदैन, बढीमा दिनको चार पिरियड पढाए पुग्छ तर यता निजी विद्यालमा कम्तिमा औसत छ पिरियडभन्दा बढी पढाउनुपर्ने हुन्छ । सामुदायिक विद्यालमा पुस्तकालय, ल्याबको ब्यबस्था गरिएता पनि शिक्षक विद्यार्थीले कमै मात्र पुस्तकालयको प्रयोग गर्छन जबकी निजी विद्यालमा साना पुस्तकालय, ल्याब हुन्छन तर शिक्षक विद्यार्थीलाई अधिकतम प्रयोग गर्न लगाइन्छ ।
सामुदायिक विद्यालको भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकारले धेरै लगानी गरेको छ प्रसस्त सरकारी जग्गा पनि छुट्याएको छ भने निजी विद्यालहरु एक दुई छोडेर प्राय भाडाका घरमा सानो स्पेसमा चलाइएका छन । तर अचम्म लाग्ने कुरा सामुदायिक विद्यालमा विद्यार्थी संख्या घट्दो छ, विषयगत तालिम लिएका शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीको परीक्षा नतिजा बढ्नुपर्ने हो, तर हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले भन्दा निजी विद्यालका शिक्षकले पारिश्रमिक न्यून लिन्छन् । स्थानीय तहमामा मात्र शिक्षा र शिक्षणका लागि सरकारले ६० अर्ब ६६ करोड रुपैया पठाएको छ जुन रकममा ५० अर्ब ४२ करोड ७५ लाख कक्षा १ देखि १० कक्षाको शिक्षकको तलबका लागिमात्रै खर्च हुन्छ । तर विद्यार्थीको परीक्षा नतिजा र गुणस्तर सामुदायिकको भन्दा निजी विद्यालयकै राम्रो हुन्छ ।
यो कटु सत्यतालाई हामी सबैले स्विकार्नै पर्छ । त्यसैले सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विद्यालयको हिजो आज र भोलिको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । शिक्षाका लागि सरकारी लगानी कतै बालुवामा पानी जस्तो बनिरहेको त छैन ? कतै हाम्रो शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणालीमा नै केही कमजोरी त छैनन् ? कतै हामी शिक्षक र विद्यालय प्रसासन अनि केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्मका सरोकार निकायहरु नै आफ्नो काम र कर्तब्यबाट चुकिरहेका त छैनौं ? कतै आन्दोलन र अनशनका आधारमा गुणस्तरलाई नजरअन्दाज गर्दै शिक्षक स्थायी गर्ने संस्थागत अभ्यासनै शैक्षिक गुणस्तरको बाधक त होइन? कतै शिक्षक विद्यार्थीलाई शिक्षामुखी, ज्ञानमुखी अगुवा बन्न प्रेरणा दिनुको सट्टा गाउँ/ टोलको राजनीति धानिदिने राजनीतिक अगुवा त बनाइरहेका छैनौं ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको चाङ बनिरहेका छन र यी प्रश्नहरुको सही जवाफ गम्भीर रुपमा खोज्नु आजको आवश्यकता हो अब धेरै ढिला भइसकेको छ । फेरि स्मरण गराए, शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो ।
( लेखक त्रि.वि.वि.का सहप्राध्यापक हुन् )